Soomaaliya: MSF oo wax ka qabatey baahiyaha degdegga ah ee daafaha Muqdisho - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Daraaseyntii nafaqada ee MSF ay ka sameysey xerooyinka ayaa muujineysa nisbooyin nafaqo-xumo oo laga welwelo
19 Nofember 2012 – Mid ka mid ah afartii carruur ah ee ku nool daafaha caasimadda Soomaaliya waxaa haysa nafaqo-xumo, sida ay tilmaameyso daraaseyn uu sameeyey ururka caalamiga ah ee caafimaadka ee Médecins Sans Frontières/Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn (MSF). Si wax looga qabto xaalad halis ah, ayaa koox ka socotey MSF ay bilaabeen hawlgal degdeg ah oo saddex-maalmood soconayey si ay u bixiyaan dabiibid nafaqo oo degdeg ah iyo daryeel caafimaad oo isla goobta lagu siiyo carruurta ka hooseysa shan sano jir.
Shaqaalaha caafimaadka ee MSF ayaa booqdey 34 xero oo ay deggan yihiin in ka badan 15,000 qof oo barokacayaal ah oo aan haysan daryeel caafimaad oo ku filan. Dadkaan qaar badan oo ka mid ah waxaa ay barokaceen marar badan waana kuwo aad u nugul.
Muddo saddex-maalmood ah, ayaa carruur 1,500 ah looga baarey nafaqo-xumo waxaana 396 lagu aqbaley barnaamijka quudinta ee MSF, kuwaas oo 70 ka mid ahi ay nafaqo-xumo aad u ba’ani ay haysey. Kooxda MSF waxaa ay sidoo kale daryeel caafimaad oo degdeg ah ay siisey 162 carruur ah, iyada oo 25 ka mid ah u gudbisey cusbitaalka carruurta ee degmada Xamar Weyne ee magaalada Muqdisho. Badidoodu waxaa ay qabeen caabuqyada neef-mareenka, cudurrada maqaarka iyo shuban. Intaa waxaa dheer, ilaa 380 carruur ah ayaa laga tallaaley cudurrada jadeecada, gawracatada, teetanada, xiiq-dheerta iyo dabeysha.
Soomaaliya gudaheeda dadweynaha waxaa weli si weyn u saaameeyey tobaneeyo sano oo gacan ka hadal uu socdey kaas oo burburiyey nidaamkii caafimaadka. Sanadihii yaraa ee la soo dhaafey, kumannaan qof oo Soomaali ah ayaa laga barokiciyey guryahooda ama u qaxay dalalka deriska ah iyada oo sababtuna ay tahay rabshad xooggan, abaar, nafaqo-xumo iyo cudurrada faafa. In kasta oo ay muuqato in ay ka soo roonaatey arrinta haqab-beelka cuntada tan iyo 2011, daraaseyn ay MSF sameysey ayaa muujineysa in nisbooyinka nafaqo-xumadu ay weli yihiin kuwo laga naxo meelo badan oo dalka ka mid ah, oo ay ka mid yihiin daafaha Muqdisho.
Nabadgelyo-xumada weli ka jirta qaybo badan oo dalka ka mid ah iyo xannibaadaha gaaritaanka la xirira ayaa ah caqabad weyn oo haysata gargaarka caafimaad ee MSF ee Soomaaliya. Deegaankan oo culeyskiisu uu aad u badan yahay, ayaa hay’addu waxaa ay si joogto ah ay waxqabadkeeda caafimaadka u waafajineysaa xaaladda. Maaddaama awood xaddidan loo leeyahay sameynta daraasado habboon iyo in wax laga qabto xaalad ba’an oo cusub, ayaa kooxaha MSF waxaa ay ku khasban yihiin in ay fuliyaan waxqabadyo kooban, iyaga oo diiradda saaraya keliya baahiyaha caafimaad ee ugu mudan.
Bishii Oktoobar 2011, laba shaqaalaha gargaarka ee MSF ka mid ah, Montserrat Serra iyo Blance Thiebaut, ayaa laga af-duubey xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee ku taalla Waqooyi-bari Kenya iyaga oo gargaar degdeg ah siinaya dadka Soomaaliyeed. Ilaa haddana waa la haystaa, waxaana MSF, in kasta oo ay weli wax ka qabaneyso dhibaatooyinka ba’an ee u baahan waxqabadyo nolol lagubadaadiyo, ay hakisey in mashaariic aan degdeg ahayn ka furto Soomaaliya ilaa laga sii daayo la-haystayaashaas.
MSF waxaa ay si joogto ah uga shaqeyneysaa Soomaaliya tan iyo 1991kii, waxaana ay weli waddaa in ay daryeel caafimaad oo nolosha lagu badbaadiyo ay boqollaal kun oo qof oo Soomaali ah ku siiso toban gobol oo dalka ka mid ah, iyo sidoo kale dalalka la deriska ah ee Kenya iyo Itoobiya. In ka badan 1,400 oo shaqaale ah, oo ay taageeraan ku-dhowaad 100 qof oo jooga Nayroobi, ayaa bixinaya adeegyo badan oo lacag la’aan ah, oo ay ka mid yihiin daryeelka caafimaadka asaasiga ah, dabiibidda nafaqo-xumada, qalliin, qaybinta biyo iyo sahay gargaar iyo gargaar ay u fidiso dadka barokacay. MSF waxaa ay hawsheeda Soomaaliya ku tiirsan tahay deeqo sadaqo ah oo keliya mana qaadato maaliyad ay ka hesho dowlad.